အချိန်ကိုက်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာလမ်းညွှန် | MACD လိုင်း Indicator သည် - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ဒါဟာခေတ်သစ်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရိုးရှင်းနှင့်ထိရောက်မှု၏အံ့သြဖွယ်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အထူးအသိပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တောင်, သင်သည်ဤမဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူကလျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ကုန်သွယ်နည်းလမ်းနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း MACD နှင့် Parabolic SAR အပေါ်အခြေခံသည်။ Parabolic ဇယားအပေါ်အပြာအစက်တူနေချိန်တွင် MACD နှစ်ခုရောင်စုံလိုင်းများပါဝင်ပါသည်။ သငျသညျအငျတာနကျပျေါတှငျထိုသူတို့အဘို့ကိုကြည့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး - သူတို့သင်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအိုလံပစ် TRADE ကိုထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ module အတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဤညွှန်းကိန်းများ အသုံးပြု. ကုန်သွယ်မှုသွားနေကြသည်။ ငါတို့သည်ဖြစ်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှုကိုဖုံးလွှမ်းရန်အ Martingale system ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်: ငါတို့သည်အချို့သောပိုက်ဆံဆုံးရှုံးလျှင်, ကျနော်တို့လာမယ့် binary option ကိုသို့ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါလိမ့်မယ်။ အဆုံး၌, ငါတို့အမြဲတမ်းအမြတ်အစွန်းရလိမ့်မယ်။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင် Martingale သည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်အတိအကျကောင်းသောအရာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့င်, သင်မှားယွင်းတဲ့လမ်းအတွက်ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်, သင်အလွန်လျင်မြန်စွာအရာအားလုံးဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှု၌, ငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနှစ်ခုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းရပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကိုပင်လျှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအရောင်းအလာမည့်သူတွေကိုအမြတ်အစွန်းရှိလိမ့်မည်, ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
Parabolic SAR တွင်အညွှန်းကိန်း
ကုန်သွယ်ရေး "UP" သင်တွေ့မြင်ပါလျှင်:
ကုန်သွယ်ရေး "ချ" ကိုသင်သိမြင်လျှင်,
ငါတို့သည်ငါတို့၏ "ကောငျးမာတင်" မဟာဗျူဟာအတွက်သုံးစွဲဖို့သွားနေသောညွှန်းကိန်းတစ်ခုမှာ Parabolic SAR ဖြစ်ပါတယ်။ အိုလံပစ် TRADE ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ module ကိုဖွင့်ပါနှင့်အညွှန်းကိန်းများစာရင်းထဲက Parabolic SAR တွင်ရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်မချက်ချင်းကြီးမားသောအပြာအစက်အဖြစ်ဇယားပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Parabolic ဇယား၏လှုပ်ရှားမှု repeat ။ စျေးနှုန်းမြင့်တက်လျှင်, အစက်ခုံအောက်တွင်ချထားပါသည်။ ကကျသွားလျှင်, အစက်သူတို့ကိုအထက်ပေါ်လာပါသည်။
အဆိုပါညွှန်ပြချက်၏ဤအင်္ဂါရပ်ကို သိ. သင်အလွယ်တကူကုန်သွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးအခိုက်အဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဇယားထိပ်ကနေအောက်ခြေဖို့ Parabolic အစက်ဖြတ်သန်းသွားသည်ဆိုပါကဥပမာအားဖြင့်, အလမ်းကြောင်းသစ် reverse သွားသည်, သင်သည် "ချ" ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်အခြားလမ်းတစ်ဝှမ်း - ဇယားထိပ်အောက်ခြေကနေ Parabolic အစက်ဖြတ်သန်းသွားသည်လျှင်, စျေးနှုန်းထမြောက်ကြလိမ့်မည်။
သင်ကအိုလံပစ် TRADE ကိုနည်းပညာပိုင်းအားသုံးသပ်ခြင်း module တစ်ခုသုံးပြီး MACD ညွှန်ပြချက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
MACD မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ် configured ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါ Setting ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်:
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, MACD နှစ်ခုလိုင်းများ (အပြာနှင့်လိမ္မော်ရောင်) ၏နှင့်ကော်လံ (Histogram) ၏ပါဝင်ပါသည်။ အပြာရောင်လိုင်းအောက်သို့ bends နှင့်လိမ္မော်ရောင်တဦးတည်းဖြတ်သန်းသွားသည်ဆိုပါကယင်းလမ်းကြောင်းသစ်နောက်ပြန်ဆုတ်နှင့်စျေးနှုန်း (downtrend) အရပ်သို့ဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးတည်းဤအချက်ကိုတစ်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှု "ချ" ဖွင့်လှစ်ဖို့အတော်လေးလုံလောက်ပါတယ်။ အပြာရောင်လိုင်းထိပ်ဆုံးမှအောက်ခြေကနေလိမ္မော်ရောင်တဦးတည်းဖြတ်သန်းသွားသည်လျှင်, စျေးနှုန်း (uptrend) သို့တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည် "UP" ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကုန်သွယ်စတင်ခင်မှာကျနော်တို့ဇယား၏အချိန်ကာလကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မီးခွက်တိုင်း5မိနစ်များအတွက်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုပြသချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ဘောင်ကိုရွေးပါ။
တစ်ဦးက Parabolic dot ဂျပန်ခုံအောက်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။
အပြာရောင် MACD လိုင်း Histogram အောက်ရှိလိမ္မော်ရောင်တဦးတည်းဖြတ်သန်းသွားသည်။
တစ်ဦးက Parabolic dot ဂျပန်ခုံအထက်ပုံပေါ်ပါတယ်။
အပြာရောင် MACD လိုင်း Histogram အထက်လိမ္မော်ရောင်တဦးတည်းဖြတ်သန်းသွားသည်။
အဖြစ်မကြာမီသင်တို့သည်ဤပေါင်းစပ်၏တဦးတည်းကိုမြင်ရသကဲ့သို့, အိုလံပစ် TRADE ကိုကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းသွားပြီး5မိနစ်တဲ့ကာလတစ်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်။
သို့သော်အညွှန်းကိန်းကိုကြည့်ရပ်တန့်ကြပါဘူး။ တိုင်းဂျပန်ခုံများအတွက်သင်တဦးတည်းကုန်သွယ်ထက်မပိုပါစေသင့်ပါတယ်။ သင်အပြာ MACD လိုင်းလိမ္မော်ရောင်တစ်ဦးချဉ်းကပ်သည်ဟုမြင်သောအခါ, သင်သည်ဤဦးတည်ချက်အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကိုရပ်တန့်သင့်ပြီးသစ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချက်ပြဘို့အစောင့်အခွအေနကိုကြည့်ပါ။
ဇယားအပေါ်တောင်မှအင်အားအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသစ်နှစ်ဦးစလုံးအနီနှင့်အစိမ်းဂျပန်မီးခွက်ပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာလုံးဝဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်အဘယျအကြှနျုပျတို့သညျပွုသွားမည်နည်း ကျနော်တို့အကူအညီများအတွက် Martingale စနစ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ 1 အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေမယ့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ခဲ့, သင်ကဒီငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ယခုတွင်သင်သည်နောက်တစ်နေ့ကုန်သွယ်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ရှိသည်အမြတ်အစွန်းရဖို့။
1 အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ *3=3အမေရိကန်ဒေါ်လာ
3 အမေရိကန်ဒေါ်လာ + 80% - 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာ (ယခင်ကုန်သွယ်ရေးကနေအရှုံး) = 1.4 အမေရိကန်ဒေါ်လာ (အသားတင်အမြတ်အစွန်း)
ယခင်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့အရှုံး $ 1 ခဲ့လျှင်သင်၏ဒုတိယကုန်သွယ်ရေး ($ 2.4) မှအမြတ်နှင့်ဖုံးပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့သင့်ရဲ့အသားတင်အမြတ်အစွန်း $ 1.4 ဖြစ်လိမ့်မည်။
1st ကုန်သွယ်ရေး - $ 1
2nd ကုန်သွယ်ရေး - $ 3
3rd ကုန်သွယ်ရေး - $ 6
4th ကုန်သွယ်ရေး - $ 14
5th ကုန်သွယ်ရေး - $ 33
6th ကုန်သွယ်ရေး - $ 78
အခုဆိုရင်သင် "ကောငျးမာတင်" ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ အထက်ဖော်ပြထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ, သင်အမြဲအမြတ်ဖြစ်စေမည်။
Tags: သိုက်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, macd လိုင်း, macd လိုင်းညွှန်ပြချက်, macd signal ကိုလိုင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု app ကို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု desktop ပေါ်က app ကို, ဥပဒေရေးရာကုန်သွယ်မှုအိုလံပစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်, အတွက်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုနိမိတ်လက္ခဏာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုများအတွက်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ, macd signal ကိုလိုင်းကားအဘယ်သို့, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု binary သောသူသည်